छन्द अभियान र माधव वियोगी « LiveMandu
१५ असार २०७७, सोमबार १८:५५
‘एकदिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरुँ हित भनी’
यस धरामा आएपछि होस् सम्हाल्दा नसम्हाल्दै सर्वप्रथम मेरा कानमा परेको श्लोक यही हो । मेरी आमा यो श्लोक बारम्बार गाउनु हुन्थ्यो । हुनत आमालाई गृहस्थी सम्हाल्दा हत्पति फुर्सत् त हुँदैनथ्यो । तर फुर्सत् भइहाल्यो भने आमाले रातो कपडामा बेरेर राखेको पुरानो एउटा किताब खोलेर पढ्नु हुन्थ्यो ।
सायद मेरी आमाका लागि त्यस जमानामा त्यही एउटा किताब मनोरञ्जनको विशेष साधन हुनुपर्छ । किनभने उक्त किताब छुने बित्तिकै आमाको अनुहार नै उज्यालो हुन थाल्थ्यो । थाकेर लखतरान भएकी मेरी आमाले सबै थकान बिर्सिँदै गएझैँ भएर त्यो किताब खोलेर पढ्नु हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको आमाको त्यो उज्यालो अनुहार र मीठो स्वर अहिले पनि मेरा कानमा गुञ्जिने गर्छ ।
त्यस जमानामा जब संसारमा टेलिभिजन अथवा मोबाइल र युट्युबको कल्पना पनि भएको थिएन र अझ हाम्रा घरमा त रेडियो नै पनि निकै पछि आएको थियो । यो कुरा अक्षरसँग मेरो परिचय हुनु अघिको हो।
संस्कृत भाषा नजान्नु, शास्त्रीय छन्दबद्ध कविता लेख्न नसक्नु तथा शास्त्रीय सङ्गीत नजान्नु मेरा लागि ज्यादै ठूलो अज्ञानता रहेछ भन्ने भास मलाई भएको छ । तर समय बितेपछि उघ्रेको आँखा सरह भएर अब यी सबै मेरा लागि मरुभूमीको मृगतृष्णा सरी पनि भएको छ ।
त्यसबेला अक्षर पढ्न सिकेपछि त्यो किताब त म पढ्छुपढ्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर आमाले त्यो किताब हामीलाई पल्टाउन त परै जाओस् राम्रोसँग छुन पनि दिनु हुन्न थियो । कपडामा बेरेर राखिने त्यो किताब पढिसकेर आमाले पूजाकोठामा भएको उहाँको विशेष काठको दराजमा थन्क्याउनु हुन्थ्यो । र त्यस दराजमा ताल्चा पनि लाउनु हुन्थ्यो । त्यस ताल्चाको साँचो पनि ठूलो साँचाकै झुप्पोमै हुन्थ्यो । जुन झुप्पो एउटा रुमालमा गाँठो पारिएको हुन्थ्यो । अनि त्यो रूमाल आमाका कम्मरमा सिउरिएको हुन्थ्यो । यसरी आमाले कसैले हत्तपत्त छुन पनि नपाउने गरी थन्क्याउने गर्नु भएको सो किताब अप्राप्य झैँ भएकैले पनि हुन सक्छ उक्त पुस्तक मेरा लागि निकै महत्त्वको थियो । यो कुरा पनि म किताबको दुनियाँमा आउनु अघिकै हो ।
खासमा मैले धेरै पछिमात्र बुबाको मुखबाट थाहा पाएकी थिएँ, त्यो किताब दुई कारणले मेरी आमाका लागि प्रिय रहेछ । एक त उहाँले सोही किताबबाटै सावाँ अक्षर चिन्नु भएको रहेछ; अनि अर्को मेरी आमाले हजुरआमासँग मागेर सोही किताब माइतीबाट दाइजो ल्याउनु भएको रहेछ । त्यसैले हामी सबै चुल्बुले केटाकेटीको सिकार हुनबाट जोगाउन उक्त किताबलाई अमूल्य निधि झैँ सुरक्षित राख्नुहुँदो रहेछ मेरी आमा । अनि जब सोही पुस्तकबाट अक्षर सिकेकी मेरी आमा दुर्गादेवी नेपालले आफ्नो अदम्य ईच्छा र साहसका कारण ‘बगेको खोला’ (२०७२) आत्मकथा नै लेख्नु भएपछि भने मलाई उक्त मेरी आमाको प्रिय किताबप्रति थप गौरव भएको छ ।
अलि ठूली भएपछि उक्त किताब नै आदिकवि भानुभक्त आचार्यको प्रख्यात कृति ‘रामायण’ भएको मैले थाहा पाएकी थिएँ । त्यसैबीच रामायणकै अर्को किताब बुबाले किनेर घरमा ल्याउनु भएको थियो र मैले त्यसपछिमात्र ‘रामायण’ मज्जाले छुन र पढ्न पनि पाएकी थिएँ । तर आमाले झैँ लय हालेर पढ्न मलाई कहिल्यै आएन । अर्थात् सिक्ने कोशिसै पनि गरिन् भन्नू उपयुक्त हुन्छ ।
लयका कविता भनेको छन्द हो र छन्द थरिथरिका हुन्छन् भन्ने कुरा सात आठ कक्षामा पढ्न थालेपछि मैले चाल पाएकी हुँ । त्यति बेलासम्ममा म स्कूलका कतिपय कवि गोष्ठीमा कविता सुनाउने पनि भइसकेकी थिएँ भने साथीहरूका लागि अटोग्राफका पन्नामा नाउँको लहर मिलाउने कविता लेख्नमा सिपालु पनि थिएँ । अनि त्यतिबेला नै साथीहरूका लागि प्रेमपत्र लेखिदिने काम पनि फाट्ट फुट्ट चल्न थालिसकेको थियो । त्यो मेरो बाल जीवनको पेसै थियो । जसबापत मलाई साथीहरूले उनीहरूका घरबाट ल्याएको वा किनेर भए पनि टिफिनको समयमा खाजा खुवाउने गर्थे ।
त्यति बेला हाम्रा विद्यालयका किताबहरूमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्यसम्राट् बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भीमनिधि तिवारी प्रवृत्ति पद्य कविहरूका कविता मैले नपढेको पनि होइन । तर यी त पाठ्य पुस्तकका घोकन्ति विद्यामा परेका थिए । अनि मेराओरिपरि जताततै भने गद्य कविताकै सेरोफेरो थियो । साथै गोपालप्रसाद रिमाल, भूपी शेरचन, ईश्वरवल्लभ, मोहन कोइरालाआदि गद्य कविहरूको डङ्का बजेको पनि त्यो समय थियो ।
तर छन्दमा कविता लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरक पथ मैले कतैबाट पनि नपाएको भने सत्य हो ।
ती भाग्यमानीहरूको आरिस गर्नबाट पनि मलाई कसैले पञ्छाउन सक्तैन । जसले माधव वियोगीजस्ता सकारात्मक, सरल, शान्त, प्रतिभाशाली, परोपकारी र निष्काम कर्मयोगी गुरु पाएका छन् ।
छन्द भनेको पुरानो शैली, गाइने वा बूढाबूढीले गाउने रामायणजस्तै गीताङ्गी हो भन्ने किसिमले त्यतिबेला चल्ने चर्चाका प्रभावले मेरो मन पनि जितेको थियो । छन्दमा लेख्नेहरू ‘डेट एक्सपायर्ड’ साहित्यकार हुन् भन्ने नै त्यतिबेला मैले पनि बुझेकी थिएँ ।
छन्दकवि भन्ने बित्तिकै अलि हियाउने किसिमको प्रवृत्तिरुपि सरुवा रोगको सिकार पनि म भएकै थिएँ । त्यसैले आधुनिक कवि हुने लहडमा धमाधम गद्य कविताकै बाटोमा म पनि अघि बढेँ ।
त्यसपछिका समयमा म जति जति वयका साथै वैचारिक पनि प्रौढतातर्फ उन्मुख हुन थालेँ अनि छन्द कविताको अर्थ र अौचित्य पनि मेरा सामू क्रमशः उघ्रिन थाल्यो । संस्कृत साहित्यका महत्तम ग्रन्थहरूका बारेमा पनि जानकारी हुँदै गएपछि भने मलाई बितेको समयप्रति दुखेसो भएको छ । संस्कृत भाषा नजान्नु, शास्त्रीय छन्दबद्ध कविता लेख्न नसक्नु तथा शास्त्रीय सङ्गीत नजान्नु मेरा लागि ज्यादै ठूलो अज्ञानता रहेछ भन्ने भास मलाई भएको छ । तर समय बितेपछि उघ्रेको आँखा सरह भएर अब यी सबै मेरा लागि मरुभूमीको मृगतृष्णा सरी पनि भएको छ । यसबेला त म फगत् बितेको समयप्रति केवल निरस तर लोभिलो दृष्टिमात्र फर्काउने निरर्थक प्रयत्न गर्न सक्छु ।
वास्तवमा छन्द नै जीवनको गति रहेछ । बेछन्दको जीवनको त अर्थै रहेन छ । छन्दबाट टाढा हुने कवि र आमाविनाको शिशुको अवस्था झन्नै झन्नै उस्तै हुने रहेछ । कस्तो रहेछ त्यो पाषाण समय जस्ले हामीलाई हाम्री छन्दमाताबाट टाढा राखेछ । मलाई बितेको समयप्रति दुखेसो मात्र छ ।
मलाई लाग्छ संस्कृत शिक्षालाई पाखा पारिनु हाम्रो समाज अधोमुखी हुँदै जानुको प्रमुख कारण हो । अर्को कुरा मानव जीवनलाई शिष्ट र मर्यादित बनाउन बालबालिकालाई बेलैदेखि संस्कृत भाषासाहित्य र छन्दको ढाँचामा पनि सामेल गरिनु पर्छ । वास्तवमा समाजलाई छन्दको लयमा आबद्ध गर्न सके धेरै किसिमका विसङ्गतिहरूबाट मुक्त पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नव नेपालको निर्माण गर्ने हो भने बालबालिकाहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा अङ्गेजी भाषा र विज्ञान प्रविधिका साथसाथै यदि संस्कृत भाषा, परम्परागत संस्कृति, नैतिक शिक्षा, योग र प्रकृतिपरक ज्ञानका साथै छन्द कविताको जगसमेत बसाल्नु पर्छ । तब हाम्रो नेपालको भविष्य पनि सुरक्षित र स्वस्थ्य हुन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ ।
मेरो त अब उर्वर समय समाप्त प्रायः भइसकेको छ । यति बेला छन्दको कखरा सिकेर महाकाव्यको रचना गर्ने धृष्टतामा बाँकी रहेको जीवन गतिलाई मैले अवरुद्ध पार्नु पनि हुँदैन ।
अहिले कल्पन चाहिँ म पनि सक्छु, माधव वियोगीजस्ता गुरु मैले पनि त्यतिबेला पाएको भए म अवश्य पनि छन्दकै विद्यार्थी बन्ने थिएँ होला ।अनि वर्तमान पुस्ता र भावी पुस्ताका भाग्यमानी युवाहरूप्रति ईर्ष्या गर्नबाट पनि मलाई कसैले रोक्न सक्दैन । ती भाग्यमानीहरूको आरिस गर्नबाट पनि मलाई कसैले पञ्छाउन सक्तैन । जसले माधव वियोगीजस्ता सकारात्मक, सरल, शान्त, प्रतिभाशाली, परोपकारी र निष्काम कर्मयोगी गुरु पाएका छन् ।
नेपाली साहित्यका प्रत्येक विधाले माधव वियोगीजस्तै एकनिष्ठ, शिष्ठ, मर्यादित र अनुशासित विशिष्ठ स्रष्टा एवम् अविरल अभियन्ता पाउन सके समग्र नेपाली साहित्यको विकासका लागि कसैले चिन्ता गर्नु पर्ने थिएन ।
कर्मनिष्ठ माधव वियोगीबाट छन्द अभियानका सन्दर्भमा विश्वव्यापी आन्दोलन र यसले पाउँदै आएको उच्चतम सफलताप्रति गर्वले शिर ठाडो पार्दै यसबेला म उहाँको जिन्दावादको नारा घन्क्याउँछु ।
• जय छन्द अभियान !
• जय माधव वियोगी !
#एकदिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरुँ हित भनी